(SAWIRO) KANSARKA XANIINYAHA OO DAAWO CUSUB LOO HELAY | Gaaloos.com
Home » Layaab » (SAWIRO) KANSARKA XANIINYAHA OO DAAWO CUSUB LOO HELAY
(SAWIRO) KANSARKA XANIINYAHA OO DAAWO CUSUB LOO HELAY
Habka shucaac ku daaweynta kansarka xaniinyaha waa hurmar dhab ah. Dhakhaatiirta ayaa ku tilmaamay daaweyn cusub ee waqtiga hore inta uu cusub yahay kansarka xaniinyaha ku dhaca inay tahay mid runtii is-beddel dhab ah keentay. Qaabkan cusub, oo lagu tijaabiyay Yurub oo dhan, waxaa la adeegsanayaa shucaac iyo daawo laga sameeyay bacteria badda hoosteeda laga helay, laakiin aan keenayn wax dhibaato ah oo barbar socda.
Tijaabooyin lagu sameeyay 413 rag ah - oo lagu daabacay wargeyska sayniska ka hadla ee The Lancet - waxay muujiyeen in kudhowaad kala bar raggaasi aanay ku harin wax raad kansar ah.
Daaweynta cudurkan waxay ragga u keeni jirtay hammiga raganimada oo si joogta ah uga taga maadaama la isticmaali jiray qalliin iyo radiotherapy.
Ilaa sagaal qof tobankiiba bukaanka waxaa ku dhici jirtay kacsi la'aan, ilaa shan qof tobankiibana waxaa ku dhici jirtay inay kaadida ceshan waayaan.
Sida uu wax u daawaynayo
"Arrintani wax kasta ayay is-beddel ku sameynaysaa," ayuu yiri Prof Mark Emberton, oo farsamadan cusub ku tijaabiyay University College London.
Marka shucaaca casaanka ah la shido, waxaa uu kicinayaa daawada si ay kansarka u disho waxayna meesheeda ku dhaafaysaa xaniinta fayow.
Gerald Capon oo ka qayb qaatay tijaabada ayaa BBC u sheegay inuu caafimaaday oo uusan kansar qabin hadda.
Tijaabada lagu sameeyay 47 isbitaal oo Yurub ku yaal waxay muujisay 49% bukaanka inay si buuxda u bogsadeen.Markii xaaladda bukaannada la sii dabagalayna, 6% oo keliya ayaa u baahday in xaniinta laga saaro, marka la barbardhigo 30% bukaannada aan daaweyntan cusub helin.
Waxaa muhiim ah, in dhibaatooyinkii xagga galmada iyo kaadinta faraha badan ay dhammaadeen muddo saddex bilood gudahood ah.Laba sano kaddibna ragga laguma arag wax raad ah ee dhibaato uga timid daawada cusub.Prof Emberton waxaa uu sheegay in farsamadani casriga ah ay ragga muhiim ugu noqon karto, sida ay haweenka muhiim ugu noqotay in burada kansarka naasaha laga jaro halkii naaska oo dhan laga goyn jiray.Tiro ka badan 46,000 rag ah ayaa sanadkii laga helaa kansarka xaniinyaha dalka UK.
Burooyinku si tartiib ah ayay u koraan, laakiin haddana ilaa 11,000 rag ah ayaa xanuunkan u dhinta sanad walba.Si kastaba ha ahaate, daaweynta cusub weli diyaar uma ahan in bukaanku helaan. Waxaa qiimeyn ku sameyn doona maamulayaasha daawooyinka bilawga sanadka cusub.Daawooyin kale oo lagu dilo kansarka xaniinyaha, sida ultrasound - oo loo yaqaan Hifu -ayay khatartoodu yar tahay dhibaatada barbar socota.Hase yeeshee daawooyinkaas caalamka lagama wada helo.
Title: (SAWIRO) KANSARKA XANIINYAHA OO DAAWO CUSUB LOO HELAY